साफ च्याम्पियनसिप : फाइनलका लागि नेपाल पहिलोपटक मैदान उत्रदै, भारतलाई हराउन कति सहज ? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
साफ च्याम्पियनसिप : फाइनलका लागि नेपाल पहिलोपटक मैदान उत्रदै, भारतलाई हराउन कति सहज ?
प्रकाशित मिति : २०७८ आश्विन ३०, शनिबार
काठमाडौं। नेपाल पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलका लागि शनिबार (आज) मैदान उत्रदैछ। माल्दिभ्सको मालेस्थित राष्ट्रिय फुटबल रंगशालामा राति ८:४५ बजे भारतविरुद्ध नेपाल मैदान उत्रन लागेको हो।
२८ वर्ष लामो साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको इतिहासमा नेपाल पहिलोपटक उपाधि होडमा पुगेको हो। खेल प्रदर्शनका आधारमा सधैँ दाबेदार रहे पनि नेपाल सेमिफाइनल भन्दा माथि कहिल्यै पुग्न सकेको थिएन। यसपटक नेपालले उपाधि जित्दै दाबेदार मात्र हैन ‘हकदार’ हुन सक्ने अवसर पाएको छ।
यद्यपि ७ पटकको च्याम्पियन भारत बलियो प्रतिद्वन्द्वी रहेको छ।
भारतलाई हराउन कति सहज ?
खेल हो जे पनि हुन सक्छ।
भारत साफ च्याम्पियनसिपको ७ पटकको विजेता हो। यसर्थ पनि ऊ बलियो प्रतिद्वन्द्वी हो। भारतको खेल प्रदर्शन हेर्दा नेपालभन्दा चुस्त खेलिरहेको हुन्छ।
सन् १९८५ देखि हालसम्मको इतिहास हेर्दा भारतले नेपालमाथि दबदबा कायम गरेको देखिन्छ। उसले १५ पटक नेपालमाथि जित हात पारेको छ। नेपालले भने दुई पटक मात्र जित हात पारेको छ। त्यस्तै ५ खेल बराबरीमा सकिएका छन्।
साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल र भारत ७ पटक भिडिसेकेका छन्। जसमा एकपटक नेपालले जित हात पारेको छ। सन् २०१३ मा घरेलु मैदानमा नेपालले भारतमाथि २–१ गोलको जित हात पारेको थियो।
केही दिनअघिको राउन्ड रोबिनको खेलमा पनि भारत १-० ले विजयी भएको थियो। यस हिसाबमा हेर्दा भारत बलियो मानसिकतामा हुनेछ। तर त्यसअघि नेपालमै भएका दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा भारत एक खेलमा मात्र विजयी भएको थियो भने एक खेल १-१ गोलको बराबरीमा सकिएको थियो।
भारतले नेपालमाथि अधिकांश जित हात पारे पनि नेपालसँगको खेल सहज नहुने बताउँदै आएको छ। नेपाललाई उसले सधैं बलियो प्रतिद्वन्द्वी रहेको बताउँदै आएको छ।
पछिल्ला खेलहरू हेर्दा भारतका लागि कप्तान सुनिल क्षेत्री खास हतियार हुन्। उनी नेपालका लागि घातक हुन सक्छन्।
अन्जन विष्ट मैदान बाहिर
नेपालका मिडफिल्डर अन्जन विष्ट आज मैदान बाहिर हुनेछन्। दोहोरो पहेँलो कार्डका कारण उनी मैदान उत्रन पाउने छैनन्। यसले नेपाललाई असर गर्ने पक्का छ। फाइनलमा पुर्‍याउन उनले नै पेनाल्टीमार्फत बंगलादेशविरुद्ध गोल गरेका थिए। त्यस्तै त्यसअघिका खेलमा पनि उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्।
पछिल्ला खेलमा मनिष डाँगी, आयुष घलान, सुमन लामालगायतले पनि राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अन्जनको अभाव खड्किन नदिन उनीहरू हतियार हुन सक्छन्।
नेपालका लागि कप्तान किरण चेम्जोङ, रोहित चन्द नेतृत्वको नेपाली रक्षापंक्ति बलियो छ। त्यो त नेपालको मुख्य रक्षा हतियार हो।
त्यसो त भारतले दुई पहेँलो कार्ड खाएका रक्षापंक्तिका सुभासिस घोष र चोटका कारण अग्रपंक्तिका फारुख चौधरीलाई पनि फाइनलमा गुमाइसकेको छ।
कप्तान किरणको साफ उपाधि दिलाउने सपना
साफ च्याम्पियनसिप तयारी गर्ने बेला कप्तान किरण चेम्जोङले आफ्नो ‘कार्यकाल’मा साफ च्याम्पियन जिताउने सपना रहेको बताएका थिए। उनी त्यो सपना साकार गर्ने विन्दु नजिक छन्। यो सपना उनको मात्र नभएर सम्पूर्ण खेलाडी र खेलप्रेमी सबैले देखेका छन्। खेल हो, एकजनाले मात्र राम्रो खेलेर हुँदैन, त्यसैले सबै खेलाडीले सपना साकार पार्न उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न जरुरी छ।
नेपाललाई भाग्यको साथ !
उत्कृष्ट खेल बिना कुनै पनि खेल जित्न सकिन्न। यद्यपि कतिपय खेलमा भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि जित हात पार्न कठिन हुन्छ।
समूह चरणको अन्तिम खेलमा बंगादेशका गोलकिपरले रातो कार्ड खानु नेपालका लागि ‘शुभ’ रह्यो। सुरुवातमै एक गोल खाएको नेपालले थुप्रै गोल गर्ने अवसर पाएपनि गोल फर्काउन नसकिरहेको बेला गोलकिपरले रातो कार्ड खाएपछि बंगलादेशलाई ‘ब्याड लक’ भयो ! त्यसपछि नेपालले अन्तिम समयमा पेनाल्टी पायो। जसकारण नेपालले १–१ को बराबरी नतिजा निकाल्दै नेपाल पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्यो।